Tilmaamaha iyo tabaha ku saabsan amniga kombuyuutarka - Ikkaro
Amniga aan rasmiga ahayn
Markay ka hadlayaan nabadgelyada kombiyuutarka, kharibayaasha waxay isla markiiba maskaxda ku hayaan, iyagoo ku xiraya guryahooda, ku qoraya koodh waxayna gaarayaan "feats" tiknoolajiyad aan la qiyaasi karin.
Sida caadiga ah qof kastaa wuxuu la wadaajiyaa jabsiga, laakiin waa wax aad u muhiim ah oo maalinle ah.
Maanta dhammaanteen waxaan adeegsannaa aalado aad u tiro badan, kumbuyuutarro, kumbuyuutarro, teleefoonno casri ah, xargaha dhejiska, smartwatchaes, ku hadla smart, Smart TV, ereaders waxaanna sii wadi karnaa aalado kale oo badan oo ku xirma shabakadda. Dhammaanteen waxaan u adeegsannaa adeegyo tiro badan, bangiyada, shabakadaha bulshada oo leh xogteena shaqsiyadeed. Xitaa qaar badan oo carruurteenna ka mid ah oo adeegsada adeegyadan ma isticmaali doonaan adeegyadan mana naqaanno sida saxda ah ee loo isticmaalo, sida loo qaabeeyo iyo sida ugu yar ee loo helo nabadgelyo inta la raadinayo ama la adeegsanayo qalab.
Dadku kama warqabaan xakamaynta waalidka, xaqiijinta laba-talaabo iyo waxyaabo kale oo badan oo aasaasi ah iyo inaynu ka warqabno inay diyaar u yihiin inay na caawiyaan.
Laga soo bilaabo qaybtaan waxaan isku dayi doonaa sida ugu macquulsan, si aan u sharaxo una siiyo tabo aan hubo inay sifiican ugu wada socdaan dhamaanteen.